Gen 3 | Shona | STEP | Zvino nyoka yakanga ina mano kupfuura mhuka dzose dzesango dzakanga dzaitwa naJehovha Mwari. Ikati kumukadzi, "Nhai, ndizvo here kuti Mwari akati, `Regai kudya miti yose yomunda?' "
Kuedzwa nokusateerera kwavanhu vokutanga
1 Zvino nyoka yakanga ina mano kupfuura mhuka dzose dzesango dzakanga dzaitwa naJehovha Mwari. Ikati kumukadzi, "Nhai, ndizvo here kuti Mwari akati, `Regai kudya miti yose yomunda?' "
2Mukadzi akati kunyoka, "Tingadya hedu michero yemiti pamunda, 3asi kana iri michero yomuti uri pakati pomunda, Mwari akati, `Regai kuudya, kana kuu­bata, kuti murege kufa.' "
4Nyoka ikati kumukadzi, "Hamu­ngafi zviro kwazvo, 5nokuti Mwari ano­ziva kuti nomusi wamunoudya nawo, meso enyu achasvinudzwa, mukava saMwari, muchiziva zvakanaka nezva­kaipa."
6Zvino mukadzi akati achiona kuti muti wakanaka kudyiwa, uye kuti unofa­dza meso, uye kuti muti unodikanwa kungwadza munhu, akatora muchero yawo, akadya, akapawo murume wake, akadya naiyewo. 7Ipapo meso avo, ivo vaviri, akasvinudzwa, vakaziva kuti ha­vana kusimira; vakasonanidza mashizha omuonde, vakazviitira nguvo. 8Vakanzwa inzwi raJehovha Mwari achifamba mumu­nda kwotonhorera madekwana, munhu nomukadzi wake ndokundohwanda pa­mberi paJehovha Mwari pakati pemiti yomunda. 9Jehovha Mwari akadana mu­nhu, akati kwaari, "Uripiko?"
10Iye akati, "Ndakanzwa inzwi renyu mumunda, ndikatya, nokuti ndakanga ndisina kusimira, ndikahwanda."
11Iye akati, "Ndianiko akakuudza kuti hauna kusimira? Wakadya kanhi muti wandakakuraira kuti urege kuu­dya?"
12Munhu akati, "Mukadzi wamaka­ndipa kuti ave neni, ndiye wakandipa zvomuti ndikadya."
13Jehovha Mwari akati kumukadzi, "Chiiko icho chawakaita?" Mukadzi akati, "Nyoka yakandinyengera, ndika­dya." 14Jehovha Mwari akati kunyoka, "Zvawaita izvozvo, watukwa kupfuura mhuka dzose dzesango; uchafamba nedu­mbu rako, uchadya guruva mazuva ose oupenyu hwako. 15Ndichaisa ruvengo pa­kati pako nomukadzi, napakati porudzi rwako norudzi rwake, irwo rwuchapwa­nya musoro wako, newe uchapwanya chitsitsinho charwo."
16Kumukadzi akati, "Ndichawanza zvikuru kurwadziwa kwako nokutora mi­mba kwako, uchabereka vana uchirwa­dziwa; kuda kwako kuchava kumurume wako, iye achava ishe wako."
17Kumunhu akati, "Zvawakateerera inzwi romukadzi wako, ukadya muti wa­ndakakuraira ndichiti, `Usaudya, zvino nyika yatukwa nemhosva yako, uchadya zvibereko zvayo nokutambudzika ma­zuva ose oupenyu hwako; 18ichakubere­kera minzwa norukato, iwe uchadya mi­riwo yomusango; 19uchadya zvokudya zvako neziya rechiso chako kusvikira wadzokera kuvhu; nokuti wakatorwa kwariri. Zvauri guruva, uchadzokerazve kuguruva.' "
20Munhu akatumidza mukadzi wake zita rinonzi Evha; nokuti ndiye mai vavapenyu vose. 21Jehovha Mwari akai­tira munhu nomukadzi wake nguvo dza­matehwe, akavafukidza nadzo.
22Zvino Jehovha Mwari akati, "Ta­rirai, munhu ava somumwe wedu zvaanoziva zvakanaka nezvakaipa; zvino zvi­mwe angatambanudza ruoko rwake aka­torawo zvomuti woupenyu, akadya, aka­rarama nokusingaperi." 23Naizvozvo Jehovha Mwari akamubudisa mumunda weEdheni, kuti arime ivhu raakatorwa kwariri. 24Naizvozvo akadzinga munhu, akaisa makerubhi kurutivi rwamabva­zuva rwomunda weEdheni, nomurazvo womunondo waimonereka kumativi ose, kurindira nzira yomuti woupenyu.